जापानको डबका होटल बाट प्रवासी गायकहरुले प्रवासी नेपालीहरुको आशु खसाले मार्मिक गितको बाण हानि ? हेरौ भिडियो - Enepalese.com
जापानको डबका होटल बाट प्रवासी गायकहरुले प्रवासी नेपालीहरुको आशु खसाले मार्मिक गितको बाण हानि ? हेरौ भिडियो
इनेप्लिज २०७४ मंसिर २३ गते १३:२६ मा प्रकाशित
स्कटनेपाल काठमाडौं – बाग्लुंगमा जन्मिएका पवासी गायक सुर्य खड्का अहिले संसार भरि नेपालीहरुको आफ्नो सुमुधुर स्वरमा मन जित्न सफल भएका छन..
जापानलाई कर्मथलो बनाउनुभएका गायक खड्का नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रमा पनि निकै सक्रिय रुपमा लाग्दै आउनुभएको छ । जापानको व्यस्ताका बावजुत पनि समय मिलाएर नेपाली गीत संगीतका लागि समय दिनुभएको छ ।
पछिल्लो समय उहाँका थुप्रै गीतहरु बजारमा आएका छन् । त्यसै क्रममा हिन्दु नारीहरुको महान पर्व हरितालिका तीजको अवसर पारेर उहाँले दुधको डेरी बोलको तीज गीत बजारमा ल्याउनुभएको छ । तेस्तै अहिले दशैँ तिहार सम्बन्धित गित (औडियो) मा बजार मा लिएर आउनु भएको छ| तेस्तै उहाका गित हरु बाट रोजगारीका शिलशिलामा विभिन्न देश जान भन्दा नेपालमै बसेर पनि राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छन।
पछिल्लो बर्ष दशैं तिहारको समयमा शान्ति नेपाली समाज बेलायतको आयोजनामा भएको कार्यकर्ममा पनि उहा सहभागी भै अझ आफ्नो सागेतिक यात्रालाइ सफल बनाउदै अगाडी बढ्नु भएको पनि छ ।
सुर्य खड्का अहिले धेरी गित हरु युटुब मार्फत लियर आउनु भएको छ । आज हामीले तपाई को लागि पछिलो बर्ष बेलायतमा खिचिएको हरेक नेपाली हरुको मन छुने गित लिएर आएका छौ पक्कै पनि माया गरिदिनु हुनेछ । (खोलि छेकेर) बेलायतवासी नेपाली हरुले सारै मन पराइ दिनु भयो अब तपाई हरुको पालो
हेरी सके पछी आफ्नो कमेन्ट सल्लाह सुझाब पनि दिन सक्नु हुनेछ ।